Qolka Ignatius | | Wararka IPhone, macruufka 9
Toddobaadkan wuxuu ahaa usbuucii betas. Horaantii todobaadkan Apple waxay sii deysay betas cusub oo loogu talagalay tvOS, watchOS, OS X iyo beta cusub oo loogu talagalay iOS, laakiin markan waxay ahayd ugu horeysay ee macruufka 9.3 marka cusboonaysiinta ugu horreysa ee macruufka 9.2, 9.2.1 ay weli ku jirto beta kuwaas oo Apple horey u sii deysay laba betas. Midka koowaad heerarka u dhexeeya macruufka 9.3.1 iyo macruufka 9.2 na tus in noocaani ugu dambeeyay ee macruufka uu ka yara gaabanyahay nooca hadda ee iOS.
Waqtigaan la joogo, in kasta oo la soo bandhigayo isticmaale Talyaani ah waa suurtagal in Jailbreak macruufka 9.3.1 Pangu ama TaiG midkoodna ma awoodin inuu soo bandhigo, sababtuna waxay tahay ma garanayaan ku-faanidda loo adeegsaday ama waxay sugayaan Apple inay soo saarto nooca ugu dambeeya. Aynu aragno haddii toddobaadkan aan ka helno war wanaagsan oo ku saabsan iyo dadka isticmaala Jailbrek waxay cusbooneysiin karaan noocyada cusub ee macruufka waxayna awoodaan sii raaxeeyso JAILBREAK.
Toddobaadkan waxaan idiin soo bandhignay fikrad cusub oo ah iPhone 7 oo ina xusuusiya wax badan oo iPhone 3G ah, laakiin leh isku xirnaanta maanta iyo inay hubaal la imaan doonto isla codsiyo isku mid ah, oo inbadan oo naga mid ahi ay u arkaan inaanay waxtar lahayn. Ilaa moodooyinka ugu horreeya ee rasmiga ah ee iPhone 7 ay daadanayaan, naqshadeeyayaashu waxay sii wadi doonaan inay bilaabaan sidii ay jeclaan lahaayeen iPhone-ka soo socda inuu noqdo. Mahadsanid Apple Configurator Isticmaalayaashu way qarin karaan codsiyadaas farxadda leh si aysan mar dambe ugu soo bixin Jadwalka ama faylalka iPhone-ka.
Apple waxay qaadan kartaa Midowga Yurub iyo maxaa qaadi kara bixiso 8.000 milyan oo euro canshuuraha, marka la isku dayayo ka faa'iideyso canshuurta shirkadaha yar ee Ireland. Lafilayay Apple Watch 2 waxay umuuqataa in aan lasoo bandhigi doonin bisha Maarso sida xanta oo dhami sheegatay. Halka Microsoft ay na siiso qiimo dhimis weyn haddii aan geyno Apple Watch marka aad iibsaneyso Kooxdaada 2.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 9 » Ugu fiican usbuuca ee ku jira Actualidad iPhone
Venture Kid, ciyaar weyn oo loogu talagalay macruufka oo uu dhiirrigeliyay Mega Man
Apple waxay aqoonsaneysaa cilad ku timid tilmaame batteriga iPhone-ka